Acorn OS, vhidhiyo yePod-senge inoshanda sisitimu iyo Apple yakashanda pa | IPhone nhau
Acorn OS, iyo iPod-senge inoshanda sisitimu yaishandiswa naApple [Vhidhiyo]
Sezvazviri mune zvese izvo kambani iyo zvino inomhanya Tim Cook inogadzira, apo Steve Jobs, Jony Ive nechikwata chavo chese vakatanga kufunga nezve mashandiro anoita izvo zvatinoziva nhasi seizoshandisa iPhone, vakafunga mikana yakawanda. Iwo maviri akakoshesa aive akapfupiswa vhezheni yeOS X yakapihwa naScott Forstall uye a Yakawedzerwa vhezheni yesisitimu yekushandisa inoshandiswa nePod, software yaizivikanwa seAcorn OS.
Vhidhiyo yaunogona kuona pazasi yakaburitswa naSonny Dickson, uyo akatoburitsa ruzivo rwakawanda rwakanangana neapuro panguva dzakasiyana. Mariri tinogona kuona, kwete zvakare zvakanaka, prototype yeiyo yekutanga iPhone inomhanya Acorn OS. Kuonekwa pamusoro pemakore, zvinoita sezvisingadaviriki kuti mukana wekushandisa system wakakosheswa inodzorwa nevhiri rekubata pane chishandiso chine skrini rese raibata, izvo zvaizotibvumidza kubata chero kwataida tisingavimbe nekufananidzwa kwevhiri chairo.
Kuunza Acorn OS
Iyo yekushandisa sisitimu yainge iine zvese zvakakosha zvekushandisa kwefoni, senge chishandiso chatinoziva nhasi seFoni, Vafonesi uye Meseji kana iMessage, asi Ndakanga ndisina chinhu chakakosha kwazvo ikozvino makore gumi apfuura: a web browser izvo zvinotibvumidza isu kuti tione chero chinhu kubva chero kupi pasirese.
Sezvo imi mese muchiziva, Apple pakupedzisira yakagara pane zvakataurwa naForstall uye skeumorphism yayo inozivikanwa iyo Jony Ive "akauraya" mu2013 nekuvhurwa kweIOS 7. Asi skeumorphism parutivi, zvizhinji zvezvatinoshandisa nhasi pane yedu iPhone, uye zvakare iPod Touch nePadad, inoramba ichichengetedza midzi yezvakafungidzirwa naForstall: inobata inoshanda sisitimu iyo makwikwi ese eApple angave akavakirwa nguva pfupi yapfuura uye yakamirira pamberi nepashure parunhare runhare. Ehezve, tenda kunaka kuti Acorn OS yanga ichingova anecdote, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Acorn OS, iyo iPod-senge inoshanda sisitimu yaishandiswa naApple [Vhidhiyo]
Iwo akanakisa maapplication kutora mukana wekutengesa kwaNdira
Kungodya chete kunovandudzwa uye kunoenderera kuita kuti zvive nyore kwatiri kuodha chikafu online